Warshada Qalab-shiidka ee Shiinaha, Qalabka-shiidka Daqiiqda
Roller Mill ee pneumatic
Rullalulatada pneumatic-ka ayaa ah mashiinka wax-shiidka hadhuudhka ku habboon ee lagu farsameeyo galleyda, sarreenka, sarreenka, galley, shaciir, qamadi, hadhuudh iyo macsarada.
Mashiinnada wax-shiidka ee korantada ayaa ah mashiinka wax lagu shiidi karo ee ku habboon galleyda, sarreenka, qamadiga durum, galley, shaciir, qamadi, hadhuudh iyo macsarada.
Mashiinka shaandhaynta daqiiqda qaaliga ah, planiftert wuxuu ku habboon yahay soosaarayaasha daqiiqda ee farsameeya sarreenka, bariiska, sarreenka durumka, galley, galley, galley, iyo wixi la mid ah.
Qalabka burka wax lagu shido ayaa si weyn loogu dabaqay warshado burka casriga ah si loo kordhiyo soo saarista burka iyo caawinta warshadaynta
Goosha saamaynta waxaa loo soo saaray iyadoo loo eegayo naqshadeena horumarsan.Mashiinka farsamaynta sare leh iyo farsamooyinka ayaa dammaanad qaaday saxnaanta la doonayo iyo tayada alaabta.
Plansifter daqiiq yar yar
Mashiinka daqiiqda yar yar ee Plansifter ee shaandhaynta.
Naqshado qolal furan oo xiran ayaa diyaar ah,Si loo shaandheeyo oo loo kala saaro walxaha iyadoo loo eegayo cabbirka walxaha,Si ballaaran loogu isticmaalo warshadda daqiiqda, warshadda bariiska, warshadda quudinta,Sidoo kale loo isticmaalo kiimikooyinka, caafimaadka, iyo warshadaha kale
Mono-Section Plansifter waxay leedahay qaab dhismeed is haysta, miisaan fudud, iyo rakibid fudud iyo habraaca socodsiinta tijaabada.Waxaa si ballaaran loogu soo bandhigi karaa warshado burka casriga ah oo loogu talagalay sarreenka, galleyda, cuntada, iyo xitaa kiimikooyinka.
Qorsheeyaha Qaybta Mataanaha
Qorsheeyaha qaybta mataanaha ah waa nooc ka mid ah qalabka wax lagu shiido daqiiqda.Waxaa inta badan loo isticmaalaa shaandhaynta ugu dambeysa ee u dhaxaysa shaandhaynta by planifter iyo baakaynta daqiiqda ee warshadaynta daqiiqda, iyo sidoo kale kala soocida alaabta xumbada, burka qamadiga ah, iyo walxaha dhexdhexaadka ah.
Qalabka Daqiiqda - nadiifiye
Sifeeyaha daqiiqda ayaa si weyn loogu dabaqay warshado burka casriga ah si loo soo saaro bur tayo sare leh.Si guul leh ayaa loo isticmaalay in lagu soo saaro daqiiqda semolina ee warshaddaha daqiiqda.
Mashiinka wax-shiididda hadhuudhka ahaan, mishiinnada dubbe ee taxanaha ah ee SFSP waxay burburin kartaa noocyada kala duwan ee agabyada waaweyn sida galleyda, hadhuudhka, sarreenka, digirta, keega saxarka digirta ee la shiiday, iyo wixii la mid ah.Waxay ku habboon tahay warshadaha sida soo saarista calafka iyo soosaarka budada daawada.
Dhameystirka bran waxaa loo isticmaali karaa sida tallaabada ugu dambeysa ee lagu daaweynayo bran ee kala go'ay dhamaadka xariiqda wax soo saarka, taas oo sii yareyneysa maadada burka ee bran.Badeecadahayadu waxay ka kooban yihiin cabbir yar, awood sare, isticmaalka tamarta hooseeya, hawlgalka isticmaale-saaxiibtinimo, habka dayactirka fudud, iyo waxqabadka xasilloon.
YYPYFP taxane ah oo rullaluistemadka pneumatic dhismeedka is haysta oo leh xoog sare, waxqabadka deggan iyo buuq yar, hawlgalku waa ku haboon dayactirka fudud iyo heerka guuldarro hoose.
Miisaanka wax soo saarka ee daqiiqda ayaa ka duwan, ka dibna habka isku darka daqiiqda sidoo kale waa mid yar ...